Update: Wasaaradda Caafimaadka oo diiwaan-gelisay 85 kiisas cusub oo Covid-19 ah | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Update: Wasaaradda Caafimaadka oo diiwaan-gelisay 85 kiisas cusub oo Covid-19 ah
Update: Wasaaradda Caafimaadka oo diiwaan-gelisay 85 kiisas cusub oo Covid-19 ah
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in Sabtida maanta ah guud ahaan dalka laga diiwaan-geliyay 85-kiis cusub oo cudurka Coronavirus.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa xustay in dhammaan maamul goboleedyada iyo Gobolka Banaadir laga helay kiisas cusub oo Covid-19.
Qoraal ay wasaaradu soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay, in Somaliland laga helay 29, Gobolka Banaadir 19, Galmudug 17, Jubbaland 14, Koofur galbeed 5 iyo Hirshabeelle oo 1 ruux ah.
24-kii saac ee la soo dhaafay, waxaa cudurka Coronavirus ka bogsaday, 13 qof, waxaana u geeriyooday 3 ruux.
Guud ahaan tirada kiisaska Covid-19 ee dalka Soomaaliya ayaa hadda mareysa 2,289 ruux, tirada bogsatay waa 431, halka tirada guud ee dhimashada ay tahay 82 qof.